Kedu esi eme ụta ntutu?
Mma na ike Uwe
Nwanyị site na okike ka a mụrụ iji weta ụwa mma. Na nke a, o nwere ihe niile ị chọrọ. Ọfọn, ọ bụghị nwanyị nwanyị dị mma, obere ụkwụ ukwu, nnukwu anya na-ekpuchi anya na ọṅụ na ihe ntụrụndụ mara mma? Oleekwa ụdị edozi isi na-adịghị emepụta ndị na-agba chara chaa na-agbasi mbọ ike ka ị nwee mmasị na ndị ị họọrọ ma na-egbochi enyi gị nwaanyị. Onye nwere ihe aka ya n'úkwù ya na ogwe aka ya. N'aka nke ọzọ, a na-achịkọta ọla aka ndị na-ejiri ike nke curls n'elu isi n'isi ụyọkọ mara mma. Onye nke atọ wee gbasaa ogologo ya na-acha uhie uhie nke ụcha nke nku ugoloọma ahụ dị ka onye dị mgbagwoju anya nke na ọ pụghị ọbụna ịkọwa ya. Nke a abụghịkwa ịgba. Ịchọrọ isonye na ịma mma a? Ọ bụrụ otú ahụ, anyị na-atụ aro ka ị tụlee otú ị ga-esi eji aka gị tụọ ụta gị n'enweghị enyemaka ọ bụla.
A bit nke tiori
Ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji aka gị na-agba ụta, ntutu a aghọwo ezigbo ewu ewu. Nke mbụ, ndị inyom East East na-eme nke ọma, mgbe ahụ site n'aka ndị inyom si mba Europe. Ugbu a, enwere ọtụtụ nhọrọ, dịka ịme ụta nke aka gị aka. Nke a bụ ụdị ntinye nke onwe ya, nke anaghị achọ ihe ọ bụla ọzọ eji achọ mma. Ma ọ bụrụ na nwanyị kpebiri ịgbakwunye ya na ncha mara mma, nke a agaghị adị oke. Ekwesiri iburu n'uche na ebe edozi isi na emetuta odidi na agwa nke odidi nile. Dịka ọmụmaatụ, ụta ntutu isi n'azụ isi ya na ụgbụ mmiri, nke e tinyere n'akụkụ ya, bun dị mma maka nzukọ azụmahịa. Tinye obere ejiji dị ala, na n'ihu anyị bụ ezigbo nwanyị azụmahịa. Ma ọ dịkarịa ala ugbu a n'ime ụlọ nzukọ. Ma ọ bụrụ na ị na-agbanye ụta site na ntutu na okpueze ma ọ bụ na n'akụkụ ma na-eyi akwa uwe ejiji na akpụkpọ ụkwụ dị elu, na nso nso a, nwanyị ahụ na-azụ ahịa ga-agbanwe dị ka onye na-emegbu mmadụ obi. Ịga nke ọma na bọl na-elekọta mmadụ ma ọ bụ otu ụlọ ọrụ nwere nkwekọrịta. Kedu, ma ịchọrọ ijikwa nkà a nke ịlọ ụwa? Ka anyị gaa n'ihu.
Ka anyị gaa n'ihu
Dị ka anyị kwugoro n'elu, e nwere ọtụtụ ọdịiche nke ịta ụta site na ntutu. Anyị ga-atụle 2 n'ime ha. Otu maka nwa nwanyị tozuru etozu, na nke abụọ maka nwa agbọghọ na-eto eto, nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma. Otu maka ihe omuma ndia bu ogologo nke ntutu. Ha kwesiri ịbụ na ọ dịkarịa ala n'ubu ha, ọ ga-akacha mma karị. A na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbazi, na-achazi ntutu isi na ndị na-emegharị nri anyị na-atụgharị.
Nhọrọ maka onye okenye. Anyị chọrọ 2 na-agbanwe mgbanaka, iri na abuo na-adịghị ahụ anya ma ọ bụ studs, a siri ike fixation lacquer na a mbo. Ka e were ya na ụta anyị dị na vertex. Site n'enyemaka nke mgbochi, anyị na-anakọta ntutu nile dị n'ọdụ ahụ n'elu mkpụrụ osisi poppy ma mee ka ọ gbasie ya ike. Ugbu a site n'elu oyi akwa na ọdụ, họrọ eriri cm 2 n'obosara ma gbanye ya n'egedege ihu, na-edozi ya site na 5 cm site na isi nke ọdụ. Mgbe gbasara banyere mkpọchi a, anyị ga-echefu ma nọgide na-agbagha ọdụ. Anyị na-achọta ya n'etiti, buru nke abụọ na-agbanwe band ma tinye ya na ebe a. Uwe, ejidere n'agbata mpempe akwụkwọ abụọ, aka anyị na-ekewa na ọkara ma jikọta ndị na-agbapụta ala na nke mbụ site na invisibility. Anyị nwere ntị abụọ nke bow n'ọdịnihu na ọdụ nke ntutu isi mgbe nke abụọ chịngọm. Anyị na-atụgharị ya na ọkọlọtọ ma tụba ya n'ime otu ntị, na-edozi ya na ntutu ma ọ bụ na-adịghị ahụ anya. Ugbu a laghachi na mkpọchi, gbanye ihu n'egedege ihu. Na-enweghị iwepụ ihe a na-adịghị ahụ anya, anyị na-agbanye ya n'egedege ihu ruo n'isi isi. Ya mere, anyị na-ezochi chịngọm ma mepụta "eriri" nke ụta ahụ. Anyị na-ahụ ihe ọzọ a na-adịghị ahụ anya ma na-agbanye ya na eriri anyị n'okpuru obere eriri rubber, ma ọdụ nke fọdụrụ na-agbagọ na flagellum ma jupụta anya anya efu. Anyị na-edozi eriri ikpeazụ ndị a na-adịghị ahụ anya, anyị na-agbazi ma na-atọghe "ntị" nke ụta ahụ na zashchikivaem ya lacquer ike fixation. Ihe niile, ntutu m dị njikere. N'otu ụzọ ahụ, ịnwere ike ịkụ ụta n'azụ isi ma ọ bụ n'akụkụ. Ọ ga-adịrị mfe karị ọrụ gị iji lee vidio ahụ, ebe ị nwere ike ịhụ nkowa nke nkà na ụzụ nke ịkụ ụta isi
Nhọrọ maka nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma. Na ebe a ka esi eme ụta ntutu maka nwa agbọghọ na-eto eto. Họrọ ebe a chọrọ isi na ntutu isi na ọdụ. Anyị na-etinye nnukwu band roba ma na-ekpuchi ya 1 oge. N'ịtu aka na-eme ka anyị gbanye anyị ntutu, ma ọ bụghị ruo ọgwụgwụ, kama ọ bụ naanị ruo n'ókè nke na anyị nwere akaghị aka, "ntị" nke ụta n'ọdịnihu. A na-akpagharị eriri roba ọzọ, anyị na-atụgharị ntutu isi anyị n'akụkụ nke ọzọ ma gharakwa ịgbatị kpamkpam n'ime ya. Anyị na-enweta "ntị" nke abụọ. A na-edozi ụta niile ọzọ na ụda na-agbanwe. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị jikọtara adịghị ahụ anya. A na-ekpuchi isi ọdụ ahụ na-agbanwe, na-agafe ya n'etiti "ntị", ma zochie ya na enyemaka nke a na-adịghị ahụ anya n'okpuru mgbatị ahụ. A na-agbazi ụta ma na-aza aza. Ụdị edozi edozi dị njikere. Ịnwere ike ịgbakwunye ya na-enwu gbaa, ma ọ bụ ị nweghị ike itinye ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, ịkwa ụta site na ntutu na aka aka anyị adịghị esiri ike, ọ dị mkpa ka anyị jupụta aka anyị ma ihe nile ga-apụ.
Kedu otu esi eburu akwa?
Uwe ejiji mara mma maka Afọ Ọhụụ
Elongated square maka ogologo ntutu
Masks maka ìhè nke ntutu isi
Macadamia mmanụ maka ntutu
Bob-kar maka ezi ntutu
Nri ihu - Ezi ntụziaka
Hairstyle ifuru si ntutu
Ntutu ntutu - akpata
Uwe isi maka ntutu ruo n'ubu
Onye ntanya ihu
Ntutu isi n 'nwanyi - Ihe kpatara, Ngwọta
Ụbọchị Ọchịchị Ụwa
Ogige ndị e mepụtara maka ubi
Obere windo ndị e ji nkume rụọ
Sprats si na Baltic azụ asa n'ụlọ
Kedu ihe ị ga-eyi uwe mkpuchi isi?
Irina Sheik pụtara na Numero na obere ntutu
Ndị sneakers kasị dị oké ọnụ ahịa n'ụwa
Kedu ihe bụ protein?
Ịkụziri ụmụ akwụkwọ akwụkwọ ọmịiko
Enwere m ike idalata ma ọ bụrụ na m aṅụ mmiri dị ukwuu?
Uwe maka ọnwụ
Crocs oyi akpụkpọ ụkwụ
Kedu ka esi eme nwatakiri enema?
Nye nwa nke ọnwa 9
Ihe mgbagwoju mmiri maka ụmụaka nwere azịza
Ịgba afa site n'ịhụnanya site n'aha
George Clooney gwara anyị banyere ehihie ụra ya na ọchịchọ ya ịlaghachi na-eme ihe
Egwuregwu maka mmepe ụmụaka
Kedu otu esi eme ememe nke ndi biara?
Subculture nke Rastaman
Kedu ka esi mee ngwa ọ bụla kwa ọnwa?